SIDA LOO AASO DABOOLKA PIKE DHERIGA CARRADA IYO DHERIGA - SOOSAARKA DALAGGA
Goobidda / Qaadida Sansevieria: Daryeelka Guriga
Qoraal dheer ah, "carrab" oo sansevieria ah ayaa suurtagaliyey in la barbardhigo hooyo-soddoheed, iyo midab cagaaran oo jilicsan oo leh daboolka pike.
Keligiis sansevieriakoritaanka dabiiciga ah ee qallalan, dhagaxa dhagaxa ah ee dhufaysyada Afrika, Hindiya iyo Ameerika, taas oo ay uga mahadcelinayso dulqaadkeeda iyo aan qabin, wuxuu leeyahay sumcad aad u qalanta sida "dhirta aan la dabooli Karin" dhirta.
Xitaa gebi ahaanba ka baxsan ciidda, kaliya ku jirta weel biyo leh, waxay sii jiraysaa wakhti dheer oo xitaa koraa.
Si kastaba ha ahaatee korodhka cimriga Sansevieria maaha sabab looga dhigo haysashada weel fudud oo ku haboon ciidda.
Nidaamka asaasiga ah ee "carrabka carruurnka" ayaa si tartiib tartiib ah u kobcaya oo wuxuu ku yaallaa meel hoose.
Sidaa darteed, weelka beeritaanka waa in la doortaa si uu u noqdo ballaaran laakiin aan qoto dheereyn iyo cabirkan ayaa ku habboon baaxadda geedka.
Sansevieria waxay awood u yeelan doontaa inay kor u qaaddo awoodda dhulka. Dharka dhererka luuqadda hooyo waxaa lagu doortaa xisaabinta: dhererku waa nuska dhexroorka - fasalada hooseeya. Maadooyinka dhexdhexaad ah iyo sareeya, dhererka taangiga wuxuu noqon karaa mid siman tan dhexaadkeeda.
Intaa waxaa dheer, hoose ee weelka waa in ay leeyihiin godadka dheecaanka oo ah cabbitaan ku filan si loo hubiyo in si wanaagsan loo soocayo qoyaanka xad-dhaafka ah.
Qalabka awooda beeritaanka ugu fiican waa muuqaal, kaas oo bixiya qoyaan ka badan qoyaanka iyo naqaska xididdada. Sida ugu fiican ee loo doorto ceramics iyada oo aan lahayn cadaan adag.
Wixii "dabaylaha pike" waa ka wanaagsan inaad doorato ciidda bacrimin dhexdhexaad ah, dabacsan, waxoogaa acid ah.
Ciidda diyaar u ah ciidda isku dar ah ee cacti iyo succulents, iyo is-wax-soo-saarka - mid ka mid ah noocyada soo socda:
laba qaybood oo ah dhul caleen ah, kala badh khudaarta, qayb ka mid ah dhulka soddon, peat iyo ciid;
qayb ka mid ah cawska, qayb ka mid ah dhulka caleenta ah, laba qaybood oo cufsan;
saddex qaybood oo ah dhul wareeg ah, hal mid kasta - peat iyo ciid.
Waxa kale oo aad ku dari kartaa noocyada ugu muhiimsan ee dhulka loogu talagalay sansevieria. perlite, vermiculite, chips lebbiska, xabbado dhuxul iyo qadar yar oo cunto lafo ah.
Mararka qaarkood sansevieriya lagu beeray dhirta dhoobada iyo dhirta dhulka. Xaaladdan oo kale, sidaa daraadeed si aan kor loogu qaadin "daboollada pike" waxay ku tartami kartaa noocyo badan oo gardarro ah, substrate nafaqo ah oo ka mid ah halabuurka soo socda ayaa ku habboon: saddex qaybood oo ah sod dhul iyo hal qayb oo ah peat, ciid qalafsan iyo compost.
Marka laga beerto ubax dabaylaha pike, hubi inaad ka taxaddariso dheecaan wanaagsan: dhoobada dhoobada, dhoobada lebiska dhuxusha, ama dhagaxyada yaryar waa in la dhigaa meesha ugu hooseysa taangiyada beerto iyo buuxinta ilaa seddex meelood oo miisaankeeda ah (gaar ahaan lakabka qoyan ee culus loo baahan yahay dhirta dhalinyarada).
Si loo beero baahida sansevieriya ee leh bur burka dhulka, oo xididada xididdada, sidaa daraadeed nidaamka asaasiga ah ee awoodda ah ee succulent wax yar ma dhicin.
Dhalinyaro daboollada pike waxaa lagu bedelaa gug walba, Maarso-Abriil. Mature tijaabooyinka waxay u baahan yihiin wax dhif ah hal mar laba ama saddex sano, gu'gii "dib u dejin".
Calaamadda loogu talagalay transplanting Sansevieria waa Dhammaystirida dhererka dhulka Nidaamka xididka.
Inkasta oo tani ay tahay, awoodda soo socota ee beeritaanka waxaa la doortay oo kaliya wax yar ka weyn kii hore - xididdada "cirifka pike" ayaa si tartiib ah u kobcaya geeddi-socodka loo yaqaan "pathogenic" ayaa laga yaabaa in ay ku dhacdo dhulka "dib-u-horumarin" ee dhirta.
Sida caadiga ah, "hooyooyinka carruurnimada" oo leh xaalado badan oo ku habboon ee rhizomes dayactir leh cusub, caleemaha yar yar si fiican u koraan.
Rhizom noocan oo kale ah fadhiistayadoo kala soocaya caleemaha dhinaca. Ka baxsiga, oo ay ku jiraan ugu yaraan hal kobcinta kalluunka, waxay noqon kartaa warshad madax banaan oo weel u gaar ah.
Sidaa darteed, si loo beddelo shahwada pike transplant, isugeyn ballaaran oo la gooyey, goobaha la jarayo waxaa lagu daaweeyaa dhuxul la jajabiyey ama fungicide iyo lagu beeray weelasha u dhigma xajmiga qaybaha qaybsan.
Taa waxaa dheer, taangoo kasta waxaa la siiyaa lakabka dheecaan filan iyo carrada ku haboon.
Guryaha iyo xafiisyadeena aadka u wanaagsan, ee sansevieriya - "Pike lip" iyo "hooyo hooyo" - waxay leedahay xuquuq kasta oo aan ku noolaan karin, laakiin si ay u noolaadaan nolol buuxda; iyada si fudud wax uga qabato xitaa daryeelka ugu yar.
Sansevieria si sax ah oo waqti transplanted transplanted si fiican u horumariyaa, waxay bixisaa caleemo badan, blooms - iyo, sida ay liiska liiska NASA, si firfircoon u nuujisa suntan qashinka ah ee sunta ah sida xayawaanka nitrogen iyo formaldehyde.
Sawirro badan oo ku saabsan "luqada hooyo" ayaa hoos fiiri: